ကြှနျုပျတို့အကွောငျး - Dongguan Xianglin ပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန် Co. , Ltd မှ။
အရည်အသွေးကုမ္ပဏီအဘယ်သူမျှမ compromises.With 100,000 အဆင့်ကိုသန့်စင်အလုပ်ရုံနှင့်ကျော် 15000 စတုရန်းမီတာစက်ရုံစေသည်ထားတဲ့အပေါ်အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ထုတ်လုပ်မှု output ကိုတစ်နေ့လျှင် 500,000 အစုံရောက်ရှိ။ ပူပြင်းစိုင်း, မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်း, မီးလျှံ pating နှင့်အတူစိတ်ကြိုက်ကွန်တိန်နာယဇ်ဖြစ်သတည်း။
Xianglin တသမတ်တည်းထုတ်ကုန်အရည်အသွေးနှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှစ်ဦးစလုံး၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည် '' မျှော်မှန်းချက်ထက်ကျော်လွန်ရန်ကြိုးပမ်း။ Xianglin မြင့်မားလေ့ကျင့်သင်ကြားဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ်များ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်များအတွက်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်ဆုံးဖြတ်ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေနဲ့လက်-In-လက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာပိုင်းကျွမ်းကျင်သူများကျနော်တို့ထုတ်လုပ်အပေါင်းတို့နှင့်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်အလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါသည်ထုတ်ကုန်နှင့်အတူကျယ်ပြန့်လက်ပေါ်အတွေ့အကြုံကိုရှိသည်။ Xianglin မှာကျနော်တို့ပုံမှန် 100 ရာခိုင်နှုန်းထုတ်ကုန်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုသေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူတက်လိုက်နာပါ။
လွယ်ကူသောသာသနာကို - သင့်ရွေးချယ်မှု
အမိန့်အွန်လိုင်း - www.dgxianglin.en.alibaba.com
ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ခုလုံးကိုထုတ်ကုန်လိုင်း 24 နာရီတစ်ရက်မိန့်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ကျနော်တို့ကိုးကားဖို့ပျော်ရွှင်များမှာ! : အီးမေးလ်ပေးပို့ ကျေးဇူးပြု. amy_wen@dgxianglin.com
: ရေကြောင်းခန့်မှန်းဘို့လည်းအီးမေးလ်ပေးပို့ပါ amy_wen@dgxianglin.com
ကျွန်တော်တို့သည် T / T နေဖြင့်ဖြန့်ဝေမတိုင်မီ 70% ချိန်ခွင်လျှာ 30% သိုက်လက်ခံပါ။
FOB ရှန်ကျန်း, ဒါမှမဟုတ်ကွမ်ကျိုး။
အမိန့် '' ကြိုတင်ပေးချေမှုနှင့် add '' တင်ပို့ရန် FOB ရေကြောင်းအချက်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးဦးစားပေးတင်သင်္ဘောလည်းမရှိလြှငျ, အမိန့်၏ 'မှတ်ချက်' 'ဧရိယာ၌ဤမှတ်သားပါ။ အကူးအပြောင်းအတွက်ဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တောင်းဆိုမှုများ (30 ရက်အတွင်း) ချက်ချင်း လုပ်. lading ၏ဥပဒေကြမ်းအပေါ်သတိပြုသင့်ပါတယ်။
ပစ္စည်း UPS အားဖြင့် visable ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှိသည်ဖို့ပုံပေါ်နေလျှင်, ဖြန့်ဝေ၏ 48 နာရီအတွင်းကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
ကုန်တင်တင်ပို့ရောင်းချမှုသည်, မဆိုအပေါင်းတို့နှင့်ရှားပါးမှုနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက် Lading ၏ဘီလ်သို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးဘီလ်ပေါ်မှာရေးထားတဲ့ရမည်ဖြစ်သည်။ သင်သည်မည်သည့်ပစ္စည်းများပျက်စီးပျောက်ဆုံးလျက်ရှိသည်သင်ကလက်မှတ်ထိုးမီ, သငျသညျပစ္စည်း, အကွာဟမှုများနှင့်အခြေအနေကိုမှတ်သားရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်သင့်ပါတယ်။
သည်နှင့်ကောင်းသောအမိန့်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့ Lading (BOL) ၏ပို့လေယာဉ်တင်သင်္ဘောရဲ့ကုန်တင်ဘီလ်ပေါ်တွင်သင်၏လက်မှတ်အဆိုပါကုန်သွယ်၏လက်ခံမှုရှိပါသည်။ သငျသညျလက်မှတ်ထိုးမတိုင်မီစစ်ဆေးခြင်းမထားဘူးဆိုရင်သင်ကအပျက်အစီးနောက်ပိုင်းတွင် (ဖုံးကွယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအဖြစ်လူသိများ) ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည်ကိုပင်လျှင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပြောဆိုချက်ကိုအပေါ်စုဆောင်းဖို့, လက်ျာ waiving, ရှိသမျှလက်တွေ့ကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဖြစ်ကြသည်။
ပစ္စည်းများအားလုံးချွတ်ယွင်းလက်ရာသို့မဟုတ်ပစ္စည်းများအားဖြင့်တစ်ခုတည်းကိုသာဖြစ်ပေါ်စေပျက်ကွက်ဆန့်ကျင်ထုတ်လုပ်သူများကမျက်ခြေမပြတ်နေကြသည်။ မဟုတ်ရင်အရေးအသားတွင်ဖော်ပြထားမဟုတ်လျှင်, ရောင်းချသူသည့်ကွန်တိန်နာ, ပိတ်ပစ်နှင့်ဤနေရာတွင်ပုံဖော်သို့မဟုတ်ဖော်ပြထားသည့်အခြားပစ္စည်းများကိုမဆိုအထူးသဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်မထိုက်မတန်ဖြစ်ကြောင်းအဘယ်သူမျှမအာမခံစေသည်။
တစ်ပြန်လာ၏ဖြစ်ရပ်မှာတော့တရားဝင် clamers အဘို့ပဌနာပါ။
အားလုံးပုံနှိပ်ပစ္စည်းများ Non-Return ဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်သူမျှမခြွင်းချက်။